Translator Newsletter: Fitarihana ALTA, Fiteny Manerantany sy maro hafa! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Jona 2019 6:58 GMT
Fitarihana ny mpandika teny ALTA eo am-pisandratana
Pikantsary avy amin'ny http://literarytranslators.org/
Roa taona misesy izao, manaiky mandray fangatahana programa fitarihana ho an'ireo mpandika teny vao misondrotra avy amin'ny teny frantsay, poloney, rosiana, ary ny fiteny Singapaoreana mankany amin'ny teny Anglisy ny ALTA na Fikambanan'ny Amerikana Mpandika Teny Literera. Araka ny voalazan'ny ALTA, “Ny Programa Fitarihan'ny ALTA dia natao hanamora sy hametrahana fifandraisana akaiky arak'asa eo amin'ny mpandika teny efa za-draharaha sy ny mpandika teny vao misondrotra amin'ny tetikasa nofantenan'ny mpandika teny vao misondrotra.”Misorata anarana ato ary mariho fa amin'ny 15 Mey 2016 ny fe-potoana farany!
Fandikan-teny ao amin'ny tontolo novelarina manerantany
Ao amin'ny tontolo novelarina manerantany amin'izao fotoana izao ahitana mailaka, fitsidihana haingana sy ny fifandraisana tsy tapaka, mora ny mahita fa lasa mifanakaiky kokoa sy lasa marokolontsaina kokoa ny olona rehetra sy ny zava-drehetra. Midika ve izany fa mihena ny filàna fandikan-teny? Tsy izany velively! Ny olona mahafinaritra ao amin'ny Translators Family dia milaza amintsika hoe nahoana ary ahoana no zava-dehibe tsy mbola nisy toy izany ny anjara andraikitsika amin'ny maha mpandika teny. Vakio ato izany!
Mampihatra ny haivarotra amin'ny maha mpandika teny mahaleotena
Pikantsary nalaina tao amin'ny https://thoughtsontranslation.com
Rehefa mampitombo ny asantsika amin'ny maha-mpandika teny isika, dia matetika manontany tena hoe firy ny fotoana tokony laniana amin'ny haivarotra. Corinne McKay manana ny valiny amin'ity fanontaniana ity ary valiny bebe kokoa ao amin'ny bilaoginy, Thoughts on Translation. Jereo ny lahatsoratra fohy sy ny ankamaroan'ireo toro-heviny ho an'ireo mpandika teny vao misondrotra sy efa za-draharaha. Loharano tena tsara ny bilaoginy!
Nahoana no tsy ho tontosa mihitsy ny fiteny iray manerana izao tontolo izao?
Pikantsary nalaina tao amin'ny http://motherboard.vice.com/
Miaraka amin'ny lohahevitra fanatontoloana, manontany tena matetika ny olona raha indray andro any, hisy indray ny fananganana ara-panoharana ny tilikambon'i Babela, ka ho iray sisa ny fiteny ampiasain'ny rehetra indray andro any. Jason Koebler nanoratra lahatsoratra mahafinaritra ho an'ny Motherboard, miresaka momba ny antony tsy hitrangan'izany. Jereo ato ary lazao anay izay eritreritrareo!